साधारण प्रोग्रामिंग परीक्षा त्रुट - एमआईएम मा कम्प्युटर प्रोफेशनल कार्यक्रम
साधारण प्रोग्रामिंग परीक्षा त्रुटिहरू
यहाँ सामान्य त्रुटिहरूको सूची हो जुन विद्यार्थीले अघिल्लो परीक्षामा गरेका छन्।
तपाईंले जवाफको लागि कुनै क्रेडिट प्राप्त गर्नुहुने छैन जुन यी त्रुटिहरूमध्ये कुनै पनि काम गर्दछ!
परीक्षाको बेलामा वा पछि तपाइँ अर्को व्यक्तिसँग सहयोग गर्न अनुमति छैन। तपाईंले पेश गर्नु भएको कार्य तपाईको हो। यदि हामी एक उत्तर पत्ता लगाउँदछ जुन दुई वा बढी आवेदकहरू बीच स्पष्ट रूपमा साझेदारी गरिएको थियो, हामी परीक्षण ग्रेडिंग रोक्न सक्छौं र सबै आवेदकहरू परीक्षण असफल हुनेछौं !! सहयोग नगर्नुहोस् !!
Array को लम्बाइलाई सङ्कलन नगर्नुहोस्। केवल उदाहरणका लागि लम्बाई3को दायरा चाहिन्छ, भन्नुहोस्, यसको मतलब भनेको होइन कि तपाईंको कार्यक्रमले3लम्बाईको arrays लाई मात्र सक्षम गर्न सक्दछ। तपाईंको कार्यक्रम कुनै आकारको array ह्यान्डल गर्न सक्षम हुनुपर्दछ! यसैले यदि हामी केहि जस्तै देख्नुहुन्छ
हामी ग्रेडिंग रोक्न र तपाईं जवाफको लागि शून्य बिन्दुहरू दिनुहुनेछ।
तपाईंको कार्यहरूमा कुनै पनि I / O प्रयोग नगर्नुहोस्! तपाइँ किबोर्डबाट कुनै पनि चीजमा पढ्न वा कन्सोलमा केहि लेख्नु हुँदैन। प्रकार्यले यसको आगतलाई आफ्नो प्यारामिटरबाट प्राप्त गर्नुपर्छ र रिटर्न स्टेटमेन्ट प्रयोग गरेर यसको जवाफ फर्काउँछ। विशेष गरी, तपाईंको प्रकार्यले GUI-based सञ्झ्याल अनुप्रयोगमा वा ब्राउजरमा आधारित वेब अनुप्रयोगको रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ। त्यसैले यदि हामी तपाईंको प्रकार्यमा निम्न विवरणहरू देख्नुहुन्छ भने, हामी ग्रेडिंग रोक्न सक्छौं र तपाइँले तपाइँको जवाफको लागि कुनै क्रेडिट प्राप्त गर्नुहुने छैन।
कन्सोल वाराइटलाइट ();
कन्सोल। पढ्ने ();
कुनै पनि अन्य I / O कथन
तपाईंको मुख्य प्रकार्यमा आउटपुट स्टेटसहरू प्रयोग गर्न ठीक छ तपाईंको प्रकार्यमा कलहरूको परिणामहरू प्रदर्शन गर्न। तर यो तपाईंको मुख्य कार्यक्रममा आगत स्टेटसहरू प्रयोग गर्न समय बर्बाद हुन्छ किनकि तपाईले तपाइँको प्रकार्यको परीक्षण गर्ने कुनै पनि arrays को मानहरू कडा-कडा कोडमा ठिक पार्दछ।
नमूना परीक्षण लिनुहोस् >